China igwe anaghị agba nchara Channel Channel Ogwe rụpụta na Factory | Huaxiao
Igwe anaghị agba nchara ọwa bụ uzo ekara ngalaba nke ogologo ígwè, otu ihe ahụ dị ka m doo. Nkịtị ọwa ígwè na-bụ-eji na-ewu owuwu, ụgbọala n'ichepụta.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere igwe anaghị agba nchara Channel mmanya
Nha : 5 # - 40 #, 40 x 20 - 200 x 100
Igwe anaghị agba nchara mmanya zuru ezu Production Usoro Nnyocha na ihicha nke ingot
Nhicha ahịrị gụnyere: ogbugba ọgbụgba ọkụ, nnyocha nyocha nke infrared, nchọpụta nchọpụta ultrasonic na ịgha ọka. Dika ọkwa nke nkedo na-aga n’ihu na-abawanye, ọ bụrụ na nkedo na-aga n’ihu nwere ike ịwepụta ihe na-enweghị ntụpọ na-enweghị ntụpọ, enwere ike ịhapụ usoro nhicha ihe na-adịghị ọcha
Igwe anaghị agba nchara nke Austenitic na-akwụsi ike mgbe ọ na-ewe iwe ma ọ nweghị ike iwusi ya ike site na iwe. Typedị nchara a nwere ezigbo ike na ike, ezigbo ike siri ike, enweghị ndọta, nhazi dị mma, ịkpụzi yana ịgbado ọkụ, mana ọ dị mfe ịmepụta nrụpụta ọrụ. N'otu oge ahụ, ụdị nchara a nwere obere nrụpụta ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma ma bụrụ ezigbo ductile na obere okpomọkụ, yabụ ọnụego kpo oku nwere ike ịdị ngwa ngwa karịa nke igwe anaghị agba nchara, dị ntakịrị ala karịa ọnụego kpo oku nke ikuku carbon nkịtị.
Roll oghere imewe
Mgbe ị na-emepụta Ogwe igwe anaghị agba nchara, ụdị mpịakọta na-agbaso usoro ụdị oghere elliptical. Mgbe ị na-emepụta ụdị oghere ahụ, a na-ewere ya na ụdị oghere ahụ nwere mgbanwe siri ike, a na-ebelata ụdị oghere dochie na ịmalitegharị igwegharị amalite, ya bụ, ụdị oghere nwere ike ịmegharị maka ngwaahịa dị iche iche, na-ekwe ka ụdị oghere ahụ nwere mgbanwe ọdịiche buru ibu karị, ka ngwaahịa niile wee belata ngbanwe ọdịdị oghere nke igwe ihe eji emecha.
Rolling okpomọkụ akara
Mgbe igwe anaghị agba nchara akpọrepu, nrụrụ nrụrụ ya na-emetụta mgbanwe nke okpomọkụ. Karịsịa na ịgbagharị siri ike, n'ihi ọsọ ọsọ na-agagharị, ịrị elu ịrị elu nke ọrụ nrụrụ adịghị ezu iji kwụọ ụgwọ okpomọkụ nke akụ na-agagharị onwe ya, na-ebute nnukwu ihe dị iche iche isi-ruo-ọdụ. Nkwado ngwaahịa nwere mmetụta na-adịghị mma na ntụpọ elu na ntụpọ n'ime nwere ike ime na ngwaahịa akpọrepu, na-emetụta ịdị n'otu nke arụmọrụ ngwaahịa ikpeazụ. Iji dozie nsogbu ndị a dị n'elu, a na-atụgharị ihe ọkụ ọkụ ahụ n'ụzọ dị egwu, wee banye mmanụ ọkụ (ma ọ bụ gas) nke na-ejide ọkụ ma ọ bụ ọkụ na-eme ka ọkụ na-ekpo ọkụ nke a na-atụgharị n'agbata ọgba aghara na etiti na-agagharị, na ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche. tupu ị banye na ọkara ịgbagharị. Inye. Iji chịkwaa oke okpomọkụ ịrị elu nke akụkụ akpọre akpọrọ mgbe a na-emegharị ma na-emecha, a na-enyekarị ngwaọrụ na-eme ka mmiri dị jụụ (tank mmiri) n'agbata usoro abụọ nke igwe na-agagharị na n'etiti ụlọ ọrụ na-emecha. Yabụ, enwere ike ijikwa ọka ọka mee iji melite arụmọrụ teknụzụ nke ngwaahịa ikpeazụ.
Usoro ọgwụgwọ ntanetị nke igwe anaghị agba nchara
N'oge gara aga, a na-eme ọgwụgwọ okpomọkụ nke igwe anaghị agba nchara na-anọghị n'ịntanetị. Site na mmepe nke sayensị na omimi nke nyocha usoro nyocha, a na-eme ọgwụgwọ igwe anaghị agba nchara nke oge a n'ịntanetị. Mgbe ị na-emepụta mmanya, maka austenitic na ferritic igwe anaghị agba nchara, ọ dịghị mfe na-emepụta oyi cracking na onwe-atụ, ikuku jụrụ ma ọ bụ tojupụtara jụrụ mgbe Rolling, ma ọ bụ mmiri jụrụ ngwaọrụ tupu ofufe shiee iji nweta ihe mmapụta okpomọkụ quenching; mmepụta N'ihe banyere igwe anaghị agba nchara martensitic, ọ dị mfe imepụta mgbawa oyi, ọ nweghịkwa ike ịme ka ọ banye n'ime akwa ahụ jụrụ oyi site na mmiri jụrụ oyi. Ọdịdị nke ihe ndina dị jụụ dị iche na akwa oyi maka ịmịpụta nchara carbon. Otu usoro bụ ịmụta ọkwa dị mma. Ihe ndina oyi, dị ka akwa oyi nke US Teledyne AIIvac osisi, nke Danieli mere na Italy na 1989, na-abanye n'ime tank n'akụkụ oke okpomọkụ. E nwere ike jupụta mmiri ahụ na mmiri iji kpuchie akwa oyi na mmiri, nke mere na enwere ike ịrụ nchara nchara austenitic. Mmiri mmiri, ma ọ bụghị mmiri quenching, na-abanye na akwa ahụ jụrụ oyi ozugbo. Enwere ike ịkwadebe akwa mkpuchi ahụ nwere mkpuchi na-ekpo ọkụ iji mee ka oge jụrụ oyi nke ngwaahịa na-agagharị. Mgbe a na-eji mkpuchi mkpuchi ahụ eme ihe maka oge jụrụ oyi, ọnụego jụrụ oyi bụ ọkara nke ọnụego obi jụrụ. Ngwunye obi jụrụ dị ala dị ezigbo mkpa iji hụ na hysteresis na-agbawa agbaji nke nchara martensitic; nke ọzọ usoro bụ: chepụta otu ọkara nke obi jụrụ bed n'ime a yinye ụdị, na nkera nke ọzọ bụ a nkịtị ogbe ụdị jụrụ bed. A na-enye onye na-ebu ala na-ekpuchi ihe mkpuchi mkpuchi okpomọkụ. Mgbe emepụtara igwe anaghị agba nchara martensite, ịkwa osisi na-efe efe na-egbutu mpempe akwụkwọ a na-achị achị ma ọ bụ ogologo ogologo. Ọ bụrụ na ọ bụ ọtụtụ onye na-achị achị, ụdị akwa akwa ụdị akwa akwa na-adọrọ ngwa ngwa n'ime mkpuchi nchekwa ọkụ, ma bee n'ime mkpuchi na mkpuchi ahụ. A na-eziga onye na-achị achị na olulu mkpuchi ọkụ, a na-adọtakwa onye na-achịkwa ya ozugbo n'ime olulu mkpuchi maka ịjụ oyi.
Nke gara aga: igwe anaghị agba nchara Angle Bar
Osote: igwe anaghị agba nchara Hexagonal Bar
Ogwe Ogwe Ogwe
Igwe anaghị agba nchara Channel Channel